ISTANBUL - Madaxwaynaha dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi [Farmaajo] ayaa mar kale waxa uu kula kulmay Magaaladda Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ninkii xilkaan kaga horeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Kulankaan oo noqonaya midii saddexaad oo ay wada kulmaan dhinacyaddaan ayaa waxaa diiradda lagu saaray is-aragooda xaaladda dalka Soomaaliya, gaara ahaan dhinacyadda siyaasadda oo dowladda Farmaajo mucaarad xoog leh ay wajaheyso.
Wararka ayaa sheegaya in kulankii ugu dambeeyay oo ay wada yeesheen dhinacyaddaan leysla soo hadal-qaaday hadalo maalmihii udambeeyay leysla dhex-marayay oo ku saabsan inuu Xasan Sheekh kusoo wajahan yahay Muqdisho, uuna ku dhawaaqayo isbaheysi mucaarad ah.
Farmaajo ayaa wuxuu utegay Magaaladda Ankara ee dalka Turkiga ka qaybgalka shir-waynaha Xisbiga taladda haya ee dalkaas, kaasoo loo yaqaan AK Party, waxaana uu kamid ahaa Madaxwaynaha Soomaaliya marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay.
Dalka Jabuuti ayuu Madaxwanaha kasoo kicitamay halkaasoo uu kula soo kulmay dhigeeda Ismaaciil Cumar Geelle oo ay kawada hadleen adkeynta xiriirka labadda dowladood, kaasoo mad-madow geliyay baaq uu Farmaajo udiray Qaramadda Midoobay isaga oo Eritrea ku sugan oo ahaa in Asmara laga qaado cunaqaybta iyo xayiraadaha saaran.
Talaabadaas oo ay si wayn uga carootay Jabuuti ayaa war-saxaafadeed kasoo baxay Safaaradeeda Muqdisho lagu dhaliilay, inkasta oo kulanka Farmaajo iyo Geelle kadib ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibada dalkaas in xiriirka yahay "mid fiican".